LibreOffice Office Suite - ဒီထက်ပိုပြီးလေ့လာရန်အရာအားလုံး | Linux မှ
LibreOffice Office Suite - ဒီထက်ပိုပြီးလေ့လာရန်အရာအားလုံးအနည်းငယ်
ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်ကောင်းစွာသိသကဲ့သို့ LibreOffice ရုံး Suite သည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ တီထွင်ကြံဆခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သုံးခြင်းခံရသော software တစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linux အသိုင်းအဝိုင်း; ဖြစ်ခြင်းအပြင်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်း၏စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် - အဆိုပါစာတမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ.
ထို့အပြင်၎င်းကိုယခုအချိန်တွင် (၁၂/၂၀၂၀) တွင်ရရှိနိုင်သည် ဗားရှင်း 6.4.7 အတွက် တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း (ဆဲဌာနခွဲ) နှင့် 7.0.3 ဗားရှင်း အတွက် မူကွဲအသစ် (လတ်ဆတ်သည်)။ ဤနောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ခြင်းသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးကြီးကျယ်ခမ်းနားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်သင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားစူးစမ်းလေ့လာလိုသောသူများအတွက် LibreOffice နှင့်ဆက်စပ်သောယခင်ရေးသားချက်များဤထုတ်ဝေမှုကိုယခုဖတ်ပြီးသည်နှင့်အောက်ပါတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
"LibreOffice ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်ဒီဇင်ဘာလပထမပတ်တွင် LibreOffice 7.1 ၏ beta version ကိုရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ယခုဗားရှင်းအသစ်သည် open source office suite ကိုပြုလုပ်ထားသော application များအတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုအချို့ကိုထည့်သွင်းထားသည်". ရရှိနိုင်သည့်ပထမ beta LibreOffice 7.1
LibreOffice 7.0 တွင် DOCX, XLSX, PPTX နှင့်ပိုမိုသောလိုက်ဖက်သောတိုးတက်မှုများစွာပါရှိသည်
LibreOffice 6.4.4 ကိုတိုးတက်မှုများစွာနှင့်အတူရရှိနိုင်ပြီ
1 LibreOffice ရုံး Suite
1.1 LibreOffice Office Suite ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 LibreOffice အကြောင်းဘယ်မှာလေ့လာမလဲ။
LibreOffice Office Suite ဆိုတာဘာလဲ။
"LibreOffice သည်ရုံးသုံးအစုံလိုက်သုံးဆောင်သည်။ ၎င်း၏သန့်ရှင်းသော interface နှင့်အစွမ်းထက်သောကိရိယာများကသင်၏ဖန်တီးမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးရန်ခွင့်ပြုသည်။ LibreOffice သည်စျေးကွက်တွင်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ရုံးသုံးအစုံအလင်ပါ ၀ င်သော application များပေါင်းထည့်သည်။ Writer၊ word processor, Calc, spreadsheet, Impress, တင်ဆက်မှုတည်းဖြတ်သူ၊ flowcharts, Base၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စ်နှင့်အခြားဒေတာဘေ့စ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်သင်္ချာဆိုင်ရာဖော်မြူလာများကိုတည်းဖြတ်ရန်အတွက်သင်္ချာ။"
ကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်တဲ့သူနှစ် ဦး စလုံး ကျွန်ုပ်တို့ (FromLinux) အခြားအလားတူဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမကြာခဏဖတ်လေ့ရှိသူများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်မကြာခဏရည်ညွှန်းကြောင်းသူတို့သိကြသည် LibreOffice (နှင့်အခြားရုံးသုံးအစုံ) သတင်းနှင့်နည်းပညာအရဆိုလျှင်အဆင့်မှာဖြစ်သည် ဖြန့်ချိ, အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတင်းနှင့်တခါတရံသင်၏အဘို့အဖြစ် တပ်ဆင် ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု အချိန်တိကျတဲ့ပြproblemနာ.
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အသုံးပြုသူအစိတ်အပိုင်း၊ ၎င်းတို့အတွင်းအရာဝတ္ထုများမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းမပြုကြပါ၊ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာသည်အမြဲတမ်းတွေးမိနေနိုင်သည်။ LibreOffice အကြောင်းဘယ်မှာဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရမလဲ။
ထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်၊ ဤစာစောင်တွင်အောက်ပါတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည် query links သူတို့ကဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန် ပိုကောင်းတဲ့နည်းနဲ့အသုံးပြုတတ်အောင်သင်ယူပါ ငါတို့အရမ်းချစ်လှစွာသော "LibreOffice Office Suite":
နှင့်ပတ်သက် တရားဝင်အဖွဲ့ ၏ဖော်ပြခဲ့တယ် Telegram တွင်စပိန်ဘာသာဖြင့် LibreOffice အသိုင်းအဝိုင်းပြီးသားနီးပါးပေါင်းစည်းရာ လူတထောင် (1000) လူ ဦး ရေ အများအပြားထံမှ စပိန်စကားပြောနိုင်ငံများ၊ ၎င်းကိုထိုအရာကိုပင်မီးမောင်းထိုးပြရန်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဆိုအရသိရသည်။
"LibreOffice (LO) ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဗဟုသုတ၊ ဗဟုသုတများစွာနဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေထားပါတယ်။ နည်းပညာမှသည်အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအထိ၎င်းတို့သည်ရုပ်သံလိုင်းအပေါ်အလွန်လေးစားစွာဖြင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသည်။"
ထို့အပြင်အသင်း ၀ င်အချို့သည်အသစ်ဖြစ်ပြီးအခြားသူများသည်အလွန်အဆင့်မြင့်သူများဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြရန်ကောင်းသော်လည်း၊ အားလုံးသည်စိတ်အားထက်သန်မှုများစွာရှိသည်။ free software နှင့်ကြီးမြတ် LibreOffice ရုံး Suite.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Suite Ofimática LibreOffice»အထူးသအယူအဆ၊ သတင်းနှင့်နည်းပညာအကြံဥာဏ်အချို့၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » LibreOffice Office Suite - ဒီထက်ပိုပြီးလေ့လာရန်အရာအားလုံးအနည်းငယ်
Ignacio Alejandro Neumann Cerda ဟုသူကပြောသည်
ပထမဆုံးရုံးသုံးရုံးခန်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့တာကတော့ Openoffice, 2006 ။
၁၄ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ငါ Libreoffice ကိုသုံးပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာနေ့စဉ်အလုပ်အတွက်ငါ့ suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်အလုပ်မှာ Office ကိုသုံးပေမယ့်ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ suite နဲ့ကျွန်တော်အခက်အခဲမရှိခဲ့ဘူး။
Ignacio Alejandro Neumann Cerda သို့ပြန်ပြောပါ
Ignacio နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ထုတ်ဝေသောအကြောင်းအရာသည်အလွန်အသုံး ၀ င ်၍ ပျော်စရာကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာသည်။
QEMU 5.2 သည် RISC-V အတွက်တိုးတက်မှု၊ compiler ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရောက်ရှိသည်